(tonga teto avy amin'ny Evanjely araka an'i Lioka)
2 Fiforonan'ilay boky
4 Loharano nanovozana
5 Fizaràn'ny boky
5.1 Fahaterahana sy fahazazana ary fiomanan'i Jesoa (1.1 - 4.13)
5.1.1 Fahaterahana sy fahazazana (1.1 - 2.51)
5.1.2 Fiomanana amin'ny asa fanompoana (3.1-4.13)
5.2 I Jesoa tany Galilia (4.14-9.50)
5.3 I Jesoa mankany Jerosalema (9.51-19.27)
5.4 I Jesoa tao Jerosalema (19.28-24.53)
5.4.1 Asa fanompoan'i Jesoa tao Jerosalema (19.28-21.37)
5.4.2 Fahafatesana sy fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty (22.1-24.53)
Fiforonan'ilay boky[hanova | hanova ny fango]
Ny lovantsofina kristiana dia milaza fa i Lioka no nanoratra ny Filazantsara mitondra ny anarany.
Teo anelanelan'ny taona 70 sy 100 no mety nanoratana Filazantsara araka an'i Lioka.
Nosoratana ho an'ny Jentilisa ny Filazantsaran'i Lioka, ka izany no isian'ny fifanahafan'ny fomba filazany sy fampianarany amin'ny an'i Paoly. Toa an'i Paoly, manantitra ny maha an'ny olon-drehetra tsy anavahana firenena ny famonjena i Lioka. Tian'ny mpanoratra hiantefa amin'ny olon-drehetra ny hafatra ao amin'ny Evanjelin'i Lioka raha oharina amin'ny an'i Matio sy ny an'i Marka, ka mametraka ny tena sy ny asan'i Jesoa ao amin'ny tantaran'izao tontolo izao fa tsy an'ny Jiosy irery ihany. Ny tetiaran'i Jesoa dia manantitra ny maha an'ny olon-drehetra an'i Jesoa Kristy. Manantena ny fotoana hitoriana ny tenin'i Jesoa any amin'ny firenena rehetra i Lioka (Lio 24.47). Mampiavaka ny Filazantsaran'i Lioka ny fitakiany ny hanjakan'ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina, indrindra eo amin'ny mpanana sy ny mahantra, isahiranany koa ireo atao hoe "mpanota" sy ireo voailiky ny fiarahamonina. Farany, tsy nataony ambin-javatra ny vehivavy, ka tsy itovizany amin'ireo Evanjely hafa izany (Lio 7.11-17; 7.36-50 ; 8.1-3).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filazantsara_araka_an%27i_Lioka&oldid=980153"
Voaova farany tamin'ny 27 Janoary 2020 amin'ny 08:02 ity pejy ity.